Maxay dadku xiiseynayaan? Ma sheekha mise mowduuca? | RUUG-CADDAA
Muxaadaradan oo maalmahanba dadweynaha lagu ogeysiinayay baraha xiriirka bulshada ayuu sheekhu diiradda ku saaray mowduuca iscafinta oo loo arkay mid si weyn loogu baahnaa.
“Soomaaliyeey aynu iscafinno, waynu isdilnaye aynu iscafinno, waynu kala irdhownaye aynu iscafino, waynu kala fogaanaye aynu iscafinno. Sanooyin fara badan ayeynu isdagaaleynay oo aan kala fogeyn, oo xitaa aynu Ilaahay ka fogeyn ee aynu iscafinno”, ayaa ka mid ahayd erayadiisa.
Dad badan ayaa isweydiinayay sababta loogu xoomay muxaaradan iyo in dadku ay xiiseynayaan sheekha wajigiisa.
Laakiin dad badan oo kale ayaa sheegay in shaki la’aan ay hadda Soomaalidu aad u daneynayaan mowduuca muxaadarada ee ah “iscafinta”.
Muxaadarada ‘cafi walaalkaa’ ayuu Sheekh Kenyaawi maanta ku soo hadal qaaday qodobbo kale oo ay ka mid ahayd in dhallinyarada Soomaaliyeed aysan ka cararin dhulkooda.
Image captionSheekh Kenyaawi ayaa ku dheeraaday dalabka cafiska ee dadweynaha dhexdooda
Wuxuu tusaale u soo qaatay in nabi Muxammad CSW uu magaalada Maka ka qaxay isagoo aad uga xun isla markaana sheegayay in haddii aan la khasbin uusan marnaba ka tagi lahayn.
“Haka cararin waddankaaga, haddii aad adigu baxdo yaa u haraya waddankii?, Yaa u haraya waalidkaaga?, yaa hagaajinaya dalkaaga?”, ayuu yiri.
Arrimihii kale oo uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd faa’iidada ay shacabka ku heystaan baraha xiriirka bulshada.
“Baraha xiriirka bulshada waa nicmo uu Alle na siiyay, laakiin waa inaan si wanaagsan oo uu Alle raalli ka yahay u adeegsanno”, ayuu yiri.
Dhawaan waxaa soo baxay warar sheegayay in Sheekh Kenyaawi uu dhaqdhaqaaqiisa ku saleynayo arrimo siyaasadeed, balse wuxuu isagu ku adkeystay in arrintaas ay tahay been abuur oo ujeeddadiisu ayku kooban tahay iscafinta shacabka.
Image captionGaroonka Koonis ayaa meel walba laga fadhiyay galabta
Wuxuu sidoo kale sheegay inuu cafiyay dadka been abuurka ka sameeyay.
Muxaadaradii galabta ayaa u muuqatay mid aysan dadku ku xiiseyneyn wajiga sheekha balse ay si weyn u daneynayeen mowduuca iscafinta ah.
Ka qeyb galayaasha ayaa buux dhaafiyay garoonka Koonis ee magaalada Muqdisho, iyadoo horay ay si dhif iyo nadir ah tiradaasoo kale u tagi jireen garoonkan.
« Dawlada Farmaajo iyo Khyre ma aanay dhiirigalin Dhalinyaradii lagu wax yeeleeyey Somalinimadooda,Calankooda iyo Wadaniyadooda.
FAA’IIDOOYINKA CAAFIMAAD EE LAGA HELO DHEGA YARAHA(QALINKII FUR-KA). »